Waa Maxay Sababta Sergio Aguero Loogu Naaneeso “Kun”....... %
By Badrudiin Mohamed	 On Jun 15, 2019
Waxaa maanta xog idiin kaga keenay sababta weeraryahanka reer Argentina Sergio Aguero loogu naaneeso “Kun” ee uu inta badan maaliyadiisa ku qorto “Kun Aguero”.
Sida uu xiddiga Man City sheegay naaneesta Kun waxaynka timid ciyaalnimadiisa, waxayna ku timid labo arimood isbiirsaday.
“Awoowgeyga ayaa sheegay inuu Isaga bilaabay inuu iigu yeero Kun, sababtoo waxa kaliya ee aan ku hadaaqi jiray waxay ahaayeen ‘koo’ iyo ‘koom’ mar kasta uu isku dayo inuu i baro erey.” ayuu yiri Aguero.
“Sidaasi darteed wuxuu bilaabay inuu igu yiraahdo ‘Kun halkaan imow, Kun halkaas aad.’”
Sidoo kale waxxaa jirta sheeko kale oo ka danbeysa naaniistiisa taasoo sii xoojisay midii uu bilaabay awoowgiis. Waana in Aguero uu u muuqaal ekaa kartoonka ay caruurta daawadaan ee “Kum Kum”.
“Kun waxay sidoo kale timid kartoon aan jeclaa oo aan daawan jiray, naaneesta Kun waxaa la iigu bixiyay madaama aan u muuqaal ekaa kartoonka Kum Kum” ayuu yiri Aguero oo weli jecel in lala barbardhigo kartoonkaas.
“Waxaan aaminsanahay in naaneysteyda ay asal tahay, madaama aysan jirin wax la mid ah. Maalin walba ma arkeysid ciyaaryahan lagu naaneesay kartoon.”
Naaneestiisa sabab kale ayay muhiim ugu tahay, sababtoo wuxuu ogaaday in dhaqanka Japan oo ah halkii lagu sameeyay kartoonka uu daawan jiray in magaca wiilasha laga hormariyo Kun si ixtiraam loogu muujiyo, halka gabdhaha laga hormariyo San aa Chan.
Maaliyadaha Aguero waxaa lagu daabacayay naaneestiisa Kun muddo sannado ah, waqtigii uu joogay Atletico Madrid, laakiin markii uu yimid Man City caqabad yar qabsatay.
Horyaalka Premier League ayaa ka dalbaday inuu soo cadeeyo inuu magaca Kun Aguero ku soo isticmaalay horyaal kale madaama ayasan baasaboorka ugu qorneyn, taasoo u sahlaneyd inuu cadeeyo madaama uu ku soo isticmaalay La Liga
Xulka Qaranka Colombia Oo Garaacday Argentina kulan ka tirsan Copa America